Presdenti Obaamaan Daawwannaa guyyaa lamaaf kenyaa Magaalaa Nairobi galuun isaa bekkeme jira. Oromia Shall be Free |
Presdenti Obaamaan Daawwannaa guyyaa lamaaf kenyaa Magaalaa Nairobi galuun isaa bekkeme jira.
bilisummaa July 24, 2015	Comments Off on Presdenti Obaamaan Daawwannaa guyyaa lamaaf kenyaa Magaalaa Nairobi galuun isaa bekkeme jira.
Garu Obaamaan biyya Kenyaa dhaqumiti kan nama raajaa jiru.
Nageya Obaamaatif dachii fi sami jiddun cufamuu isaatu warra magaalaa nairobi hedduu dallansisee jira.
Fakenyaaf guyyaa tokkicha Obaamaan boqannaa achitti gadgeysaa jiru kanatti Polisin kenyaa namni kuma 10 egumsa magaalattif kan ramadaman tahuun bekkame jira.
Kumni kudhan akkasi CIA Amrekaa fi Polisin Amrekaa waljiddutti nageyaa Obaamaatiif Rakko fi gola hunda keysatti ramadamani jiraachuun bekkamaadha.
Gara Samiitiin xayyaara dhiisi allaattinilleen akka gubbaa hin bararre godhamete jirti.
Qarqara bishaan kenyaatin ji’a tokkon dura humnota nageya Amrekaatin tohannaa jala turuun isii ni bekkama.
Previous Appeal letter to president Obama
Next EBBAA BARNOOTA OL-ANNNOO BARA 2015